D Savannah Loft, Woodbrook. Yesimanje, Eyimfihlo, Enokuthula
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Marlon
Ibekwe enhliziyweni yomlando wendawo yaseWoodbrook futhi izungezwe amakhaya amakoloni amahle; le loft iyiphupho labathandi basekhaya besimanje.
Le loft ebanzi inophahla lwamamitha ayi-16 kanye nokukhanya kwemvelo okuningi. Ilala ngokunethezeka okungu-4, inombhede wosayizi wendlovukazi endaweni ephezulu ephezulu kanye nosofa wosayizi wendlovukazi wokudonsa phansi.
Ikhishi lesimanje lihlanganisa uhla lukagesi, i-microwave namahhavini we-toaster, iketela letiye likagesi, ifriji yensimbi engagqwali enosayizi ogcwele, nazo zonke izinto ezibalulekile ezidingekayo ukuze udale isidlo osithandayo. I-washer ne-dryer ihlaliswa kalula ekamelweni lezinsiza. Kukhona futhi ivulandi elivikelekile elifanele inkomishi yekhofi ekuseni kakhulu, isikhathi esincane uwedwa nencwadi yomuntu oyintandokazi noma iziphuzo zasebusuku.
I-D Savannah Loft itholakala esakhiweni esivikelekile, futhi iyunithi ifakwe ukuqapha kwevidiyo nge-elekthronikhi kokubili ngaphandle nangaphakathi kwesakhiwo. Iyunithi iza nendawo yokupaka evikelekile emgwaqeni. Eyunithi kukhona ne-inthanethi engenantambo yesivinini esiphezulu (i-WiFi) , ama-alamu entuthu, nesicishamlilo. Iyunithi futhi ine-air conditioned ngokugcwele.
4.95 ·153 okushiwo abanye
Ukuhamba ibanga lokuya kumaNxusa amaningi, amaKhomishana Aphakeme kanye nesakhiwo se-UN.
I-D Savannah Loft iyindawo nje yokuphonswa kwetshe kusukela kuhabhu leqembu le-nightlife le-Ariapita Avenue kanye no-Tragarete Road; enezinhlobonhlobo zezinketho eziphezulu nezasendaweni zokudlela nezokuzijabulisa, okuhlanganisa i-Pan Yards kanye ne-Mas Camps.
Siyatholakala nganoma imiphi imibuzo, imibuzo nezinkathazo ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb, i-imeyili, umbhalo noma ucingo.
UMarlon Ungumbungazi ovelele